စလုံးရေစ … စွပ်ပြုတ် | Layma's World
Filed under: That's what I wanna say, Thinkings from story |
« လွတ်လပ်ခြင်း အချစ် ဆိုသည်မှာ … »
သားကြွက်, on October 10, 2008 at 4:45 pm said:
ဆရာဖေမြင့်ရေးတာထက် အောက်က တီကြွက်ရေးထားတာကို ပိုသဘောကျတယ် ကျနော်လည်း စိတ်ညစ်တဲ့ အချိန် သူငယ်ချင်းတွေကို သတိရတဲ့ အချိန်တိုင်း ကော့မန့် အဟောင်းတွေပြန်ဖတ်ဖြစ်တယ် တကယ့်အမှတ်တရပါပဲ အင်တာနက်ကြီးဆိုတာရှိနေသေးသ၍ တော့ ခင်မင်မှု အမှတ်တရတွေ ရှိနေမှာပါပဲ။ ခင်ဖို့ ကောင်းတဲ့ အစ်မကြီးဆီမှာတော့ ရင်ဘတ်နဲ့မခံစားပဲ ဘာမှမပြောခဲ့မရေးခဲ့တာ သိတယ်ဟုတ် 😛 ကိုယ့်ရင်ဘတ်ထဲက စကားတွေ ချရေးပေးခဲ့တာ ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်အတွက်တော့ နှလုံးသား အာဟာရတစ်ခုပါပဲ …ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ က အပြန်အလှန် နှလုံးသားစွပ်ပြုတ်တွေ သောက်နေကြသူတွေပေါ့ဗျာ 🙂
sin dan lar, on October 10, 2008 at 5:10 pm said:
တကယ့်အာဟာရအပြည့် စွပ်ပြုတ်တစ်ခွက်အတွက်ကျေးဇူးပါ မလေးမ..
အဲ..”မလေးမ” နံမည်ကို ချရေးတော့မှပဲသတိထားမိတော့တယ်။
ရှေ့ကဆိုဆို၊ နောက်ကနေ ဘက်ဆုတ်ပြီးပဲခေါ်ခေါ် တူတူပဲနော်…:))
sin dan lar, on October 10, 2008 at 5:15 pm said:
အား…ဘာပုံရီးလဲ…”လွတ်လပ်ခြင်း”မှာ ကောမန့်ရေးတုံးကလည်း သာမီးပုံက ဒီလိုခရမ်းကောင်အကောင်ပုံကြီးထွက်လာတယ်၊ ခုရောပဲ..မတရားဝူး..သူ့ကျတော့ မျက်မှန်နဲ့ ရှိုးစမိုးအပြည့်ပဲ..တူညားတွေပုံကျ မလှအောင်လုပ်ထားဒယ်…:(((((
သားကြွက်, on October 10, 2008 at 5:41 pm said:
ဟားဟားး ဟုတ်ပါ့ မsin dan lar ပုံကြီးက ကာယဗလ မောင်ကြီးလိုပဲ ဟိဟိ 😛 😀
THS, on October 10, 2008 at 6:27 pm said:
အဆိပ်မပါမှန်းသိတဲ့အတွက် ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ သောက်သုံးမိပါတယ်၊ စာလုံးအနက်နဲ့ရေးထားတဲ့ စကားလုံးတွေကိုအကြိုက်ဆုံးပါပဲ၊ စိတ်အစာတစ်ခုကို စားသုံးခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါ၊ အဆင်ပြေပါစေ အစ်မလေးမ 🙂
ယောင်းမရဲ့ ယောင်းမ, on October 10, 2008 at 7:14 pm said:
ယောင်းမက ဒါမျိုးတွေ သိပ်တတ်တယ် ။ သိပ်တတ်နိုင်လွန်းတယ် ။
အခြေအနေ ၊ အချိန်အခါ ၊ အကြောင်းအရာ အစပ်အဟပ် သူ့နေရာနဲ့သူ ကွက်တိပဲ ။ လိုအပ်တဲ့ ကာတွန်း ၊ ပုံပြင် ၊ ရာဇဝင်အချက်အလက်တွေကိုလည်း အကြောင်းအရာနဲ့ အံကျအောင် ဆွဲယူအသုံးပြုပြီး ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ ကို ရောက်အောင် ဆက်စပ်သွားပုံတွေ ….. ယောင်းမရေ ။
ခုတော့ ရေးခဲ့ပါပြီ ။
စွပ်ပြုတ်ကောင်းကောင်းလေးအတွက် အထူးကျေးဇူးပါ ယောင်းမရယ် ။
ဒီစွပ်ပြုတ်က အဆိပ်မပါပေမဲ့ ငရုတ်ကောင်းတော့ ပါပုံရတယ် … ။ ထိသွားတာပဲ ။ အာပူ လျှာပူ လိုပဲ ။
sin dan lar, on October 10, 2008 at 9:19 pm said:
ကြွက်စုတ်ကြွက်နာ ..ဒိုင်းဒိုင်း…(ဦးစိတ်တိုနဲ့မျောက်ညိုကာတွန်းမှ မှီငြမ်းပါသည်):P
ဝေလေး, on October 10, 2008 at 10:24 pm said:
ဝေလေးလဲ ဒီလိုပဲ စိတ်ညစ်လာရင် အရင်ပို့စ်အဟောင်းတွေက ကွန်မန့်တွေပြန်ဖတ်မိတယ် အလွတ်တောင်ရနေပြီ…..
…… ကိုယ့်ရင်ဘတ်ထဲက စကားတွေ ချရေးပေးခဲ့တာ ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်အတွက်တော့ နှလုံးသား အာဟာရတစ်ခုပါပဲ …
မမကို အာဟာရ တိုက်ကျွေးသွားတယ်နော် သောက်လို့ကောင်းတယ်ဟုတ် 😛 😛
မမရဲ့ စွပ်ပြုတ်ကိုလည်း စ်ိတ်ချလက်ချကိုသောက်သွားတယ်. ကောင်းမှကောင်း 😀
ပန်ဒိုရာ, on October 11, 2008 at 12:10 am said:
လူတွေကို ခင်မင်တတ်ပြီး စေတနာပါတဲ့ ပို့စ်လေးတွေကို ရေးတတ်တဲ့ လေးမအတွက် နှလုံးသားထဲက လာတဲ့ မှတ်ချက်လေးတွေ ဆက်ပြီး ရနေဦးမှာပါပဲ။
ရေးသူအတွက်ရော ဖတ်သူတွေအတွက်ပါ ရေးဖြစ် ဖတ်ဖြစ်နိုင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ အချိန်၊ အင်တာနက် လိုင်းကောင်းမကောင်း အနေအထား၊ နောက်ခံ စိတ်ခံစားမှု အခြေအနေ ကြည်ကြည်လင်လင် ရှိနေတာတွေ တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါ အပြန်အလှန် လှိုင်းလေးတွေက ပိုအသက်ဝင်လာမှာပါ။ သို့သော်လည်း အခြေအနေဆိုတာ အမြဲတမ်းတော့ ကိုယ့်ဘက်မှာ ရှိမနေနိုင်ဘူး။ ကိုယ့်အတွက်တော့ တဖြည်းဖြည်း ကျဉ်းမြောင်းလာလို့ ဖန်တီးတဲ့ အချိန်တောင် အနိုင်နိုင်ပဲ လေးမ။
ပုံရိပ်, on October 11, 2008 at 11:15 am said:
မလေးမရေ နေမကောင်း ဖြစ်ပြီးစလူက စွပ်ပြုတ်ပြန်တိုက် နေရတယ်။ ဟဲ။ စာမူခ (ကော်မန့်) တွေကို ပုံရိပ်လည်း နှစ်သက် ပါတယ်။ စွတ်ပြုတ်တွေ ဆက်တိုက်နိုင် ပါစေ။
layma, on October 11, 2008 at 12:40 pm said:
>သားကြွက် … အာဟာရ ဒါန ပြုသူများလို့ခေါ်လို့ ရသပေါ့…။ သားကြွက် သူများကို လာစတာ ပစ်ခံရပြီ မဟုတ်လား…။
>sin dan lar … စင်ဒရဲလားရဲ့ ညီမလေးများလား…။ ဟုတ်ပ.. ညီမလေးပုံလေးက ချစ်စရာလေးနော်..။ ဒါနဲ့ညီမလေးက ဒိုင်း..ဒိုင်း လုပ်ပြီး ရလာတဲ့ ကြွက်ကို ကင်စားလိုက်နော်…။ ဟီး…။ ထွေနေတယ်ဆိုတော့ ( အရက်) ဘယ်နှစ်ခွက် သောက်လိုက်မိတာတုန်း…။
>ဘိုတင့် … အသုံးတည့်တယ်ထင်ရင် ဗိုက်ဆာတိုင်း ဒီနေရာ လာခဲ့နော်… စွပ်ပြုတ်တွေ ရှိတယ်..။
>ယောင်းမ … ဟား.. ဟား… ငရုတ်ကောင်းလား … ပါသပေါ့ကွယ်… ။
ရခိုင်မုန့် တီမှာ သုံးတဲ့ ရခိုင်ငရုတ်သီး ထောင်းလေးတောင် စွပ်ပြုတ်ထဲ ဖွက်ထားလိုက်သေးတယ်…။ ယောင်းမက မွှေသောက်တော့ ထိသွားတာပေါ့ …။
>ဝေလေး… ကောင်းမှကောင်း… လား…။ ပါဆယ်ယူသွားနော်…။
>မပန် … အရီးလေးပန်… လေးမလည်း တူတူပါပဲ.. မပန်… ။ အခြေအနေတွေက လိုက်ဖမ်းနေလို့ပြေးလွှားနေရတယ်…။ ကျန်စစ်သားက စောလူးမင်းကို ရန်သူ့လက်က ကယ်ပြီးမှ ပြန်ပစ်ချခဲ့သလို ဘလော့ဂ်ကို မပစ်ချနိုင်သေးလို့ 
ဘလော့ဂ်ပွေ့ ရင်း အခြေအနေတွေ လက်က လွတ်အောင် ပြေးနေတယ်…။ မပန်လည်း ကျဉ်းမြောင်းလာတဲ့ အခြေအနေတွေ ကြားထဲက ဘလော့ဂ်ကိုပွေ့ ရင်း လွတ်အောင် ပြေးပါ..။
>မပုံရိပ် … ဟဲ… စာတွေ ပြန်ရေးဖြစ်နေတာ တွေ့ ရတယ် …။ ဆက်မိုက်နေပါ…ရှင်..။
ညိမ်းညို, on October 11, 2008 at 6:23 pm said:
အစ်မလေးမရေ အဆိပ်မပါမှန်းသိလို့ ရဲရဲကြီးမော့သောက်ချသွားတယ် 🙂
မှတ်မှတ်ရရ ဆယ်တန်းမြန်မာစာမေးခွန်းမှာ အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ် ဆိုပီး စာစီစာကုံးခေါင်းစဉ်တစ်ခု ပါတယ် အဲတုန်းက အတွဲ၁ နဲ့၂ ပဲထွက်သေးတာ
အခုအစ်မလေးမထုတ်နုတ်ပြတဲ့ နှလုံးသားအာဟာရ စာအုပ်ကို ရေးခဲ့တယ်
အစ်မလေးမပို့စ်တွေက အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ဖတ်ရတွေးရတာ သဘောကျတယ်။
ကွန့်မန့်ရေးတာကတော့ အမလောက် စာမချောတာ ခွင့်လွှတ်ဗျ။
ဆယ်တန်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေရေးပေးထားတဲ့ စာအုပ်လေး ခုထိရှိသေးတယ်
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေခင်ဗျာ … 🙂 🙂
ခေးရော့စ်, on October 12, 2008 at 12:09 pm said:
ချစ်မက တကူးတကပြန်တင်ပေးတယ်ဆိုတော့ အစ်မစေတနာကို အပြည့်အ၀ အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ သေသေချာချာ နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ဖတ်သွားပါတယ်။
သေချာတာပေါ့ ကွန်မန့်တွေကအားဆေးဆိုတာ ဘလော့ဂါကိုယ်တိုင်က အသိဆုံးပဲဟာ။
ချစ်မအတွက်အားဆေးပါတယ်။ အာဘွားးးးးးးးးးးးး
ရွှန်းမီ, on October 12, 2008 at 3:14 pm said:
ချစ်မ ချက်ကျွေးတဲ့ စွပ်ပြုတ် လာသောက်သွားပါတယ်။
တကယ် နေမကောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်း ချက်ကျွေးတဲ့ စွပ်ပြုတ်ကိုလည်း သတိရသွားတယ်။ သောက်လို့ အရမ်းကောင်းတယ်။
မလေးမ ရေးသလိုပဲ။ သူငယ်ချင်းတွေ ကိုယ့်အပေါ်ထားတဲ့ စေတနာ ဆိုတာ စိတ်ရဲ့  အာဟာရပါပဲ။
MhawSayar, on October 15, 2008 at 3:46 pm said:
သိပ်အရသာရှိတဲ့ စွပ်ပြုတ်တစ်ခွက်ပါပဲဗျာ. မိတ်ဆွေတွေကို မျှဝေချက်ကျွေးတဲ့ မလေးမ ကို အားလုံးကလည်း သိပ်ကို ကျေးဇူးတင်မိကြမှာပါ. နောက် အစ်မပြောသလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးမှာလည်း ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကို ဆိုပေမယ့် သူတစ်ပါး တွေ ကိုယ့်ကို ချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်၊ ကိုယ့်အပေါ် ထားတဲ့ အမြင် စတာတွေကို စကားနဲ့ပဲ ဖွင့် ပြောသည် ဖြစ်စေ၊ ဖွင့်မပြောသည်ဖြစ်စေ အလေးအနက် တန်ဖိုး ထားပြီး သိမ်းဆည်း သိုဝှက်တတ်ကြမှာ မလွဲပါလောက်ပါဘူး. 🙂
nu-san, on October 19, 2008 at 9:54 am said:
လေးမရဲ့ စွတ်ပြုတ်ကို အားပါးတရကြီး သောက်သွားပါတယ်။ ညီမလေးရဲ့ Blog ကို ရောက်တိုင်း comment မပေးပဲမနေနိုင်ပါဘူး။ နောက်ပြီး comment တွေကို အလေးထားပြီး သေချာ save လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ အံ့သြမိတယ်။ တခါတလေ သူငယ်ချင်းတွေ ရေးသွားတဲ့ comment တွေက တကယ်ကို အားဖြစ်စေတယ်…
မပန်ကို ပြန်ဖြေထားတာလည်း သဘောကျတယ်….။:D
မင်းကျန်စစ်, on October 26, 2008 at 10:52 am said:
အမလေးမရေ.. စွပ်ပြုတ်တိုက်တဲ့ ကျနော့်အမကို ကျနော်လဲ အားဆေးပြန်တိုက်မှာပေါ့။း)
အမရေးတဲ့စာတွေမှာ လေးနက်တည်ကြည်တဲ့ လူကြီးဆန်မှုတွေပါတယ်။ ဒီလိုစာတွေ ဖတ်ရတဲ့အခါ အကျိုးတစ်ခုခု ဖြစ်စေလို့ ကျေးဇူးတင်တယ် (ဖတ်နေတုန်း ပေးလိုက်ရတဲ့ အချိန်အတွက် အသိတရားတစ်ခုခု ပြန်ရစေတယ်)။ ဖော်ရွေတဲ့ ဆက်ဆံမှုရှိတယ်။ အချိန်အခါနဲ့အညီ ရာသီစာတွေပါတယ်။ ဗဟုသုတဖြစ်စရာတွေရှိတယ်။ မှတ်မိနေသေးတယ် တခါက ဒီပို့မှာ ခေါင်းစဉ်အတပ်မှားထားတာကို မှားနေတယ်လို့ မပြောပဲ အမှားမှန်းသိအောင်တော့ ထိမ်းပြောပေးခဲ့တာပေါ့။ အမသတိပေးမှ မှားနေမှန်း သိလို့ ပြင်ခဲ့ရတယ်။ အမှတ်တရရှိနေပေမယ့် ကြားရက်မှာ မအားလို့ ခုမှ ပြောဖြစ်တာပါ။ (မာ့ခ် လို မဖြစ်ရအောင် ခုတခါတည်း သတိတရပြောလိုက်တာ 😛 ) ။ ပြသနာတစ်ခုခုကြောင့် စာရေးတာ ရပ်သွားမှာကို စိုးရိမ်မိပါတယ်။ အမြဲရေးနေဖို့ မျှော်လင့်ပါကြောင်း အမရေ။
lay-ma, on October 26, 2008 at 7:24 pm said:
>ညိမ်းညို … တော်လိုက်တာ အစ်မက တက္ကသိုလ်ရောက်မှ အဲလို စာအုပ်မျိုးဖတ်ဖူးတာ…။ မြန်မာစာလည်း ဂုဏ်ထူးမထွက်ဖူးဘူး…။ အားငယ်ပါ့…။
>ခေးရော့စ်… ၀ိုး.. အားရှိသွားပြီ… လက်ဆောင်ပြန်ပေးမယ် … အာဘွား…။
>ရွှန်းမီ … စွပ်ပြုတ်ချက်ကျွေးတဲ့ သူငယ်ချင်းရှိတာ မီ ကံကောင်းတာပဲ…။
>မှော်ဆရာ … ရေးသွားတာ အားရှိ စရာပဲ… ရော့.. ပါဆယ်ယူသွားဦးနော်…။
>မနုစံ … အစ်မရဲ့ ကွန်မန့် တွေက အမြဲပဲ အလေးအနက်ရှိနေတာ လေးမ သတိထားမိပါတယ်…။ မပန်ကို ပြန်ဖြေထားသလိုပဲ နော်… မနုစံရော လေးမရော.. ဆက်ပွေ့ ထားကြစို့ …။
>ကျန်စစ်… ဘာ.. မာ့ခ်လိုလဲ.. လျှောက်မပြောပါနဲ့ …ဖွက်…။ အားဆေးက မော်စကိုကမို့ ထင်တယ်… အစွမ်းထက်ပါ့… ကျေးဇူး…။ ကျန်စစ်တို့ လည်း ကာလကြာကြာ စာရေးနေဖို့အစ်မ မျှော်လင့်ပါတယ်…။